कसरी आफ्नो सम्पत्ति बढाउने र आफ्नो नेट वर्थ निर्माण गर्ने - Victor Mochere
तपाईंले कारहरू घुमिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ र थाहा छ कि तपाईंले ती मध्ये कुनै पनि स्वामित्व पाउनुहुन्न, वा सायद तपाईं त्यससँग ठीक हुनुहुन्छ। वा सायद तपाइँ केहि सम्झौताको फाइदा लिन चाहानुहुन्छ तर तपाइँको बजेटले त्यस्ता खरिदहरूको लागि अनुमति दिँदैन। तपाईलाई चाहिने र चाहिने सबै चीजहरूको लागि अतिरिक्त पैसा खोज्न सजिलो छैन, तर तपाईको खल्तीमा थप नगद प्रवाह राख्न धेरै साना तरिकाहरू छन्। तपाईंले जतिसुकै कमाउनु भए पनि, केही खर्च घटाउन र सम्पत्ति बढाउन सम्भव छ।
एक व्यक्तिको आर्थिक स्थिरता उसको नेट वर्थ द्वारा जनाइएको छ। रकम, जुन व्यक्तिले भविष्यमा सबै सम्पत्ति र दायित्वहरू बेचेर कमाउने अनुमान गरिएको छ, यो व्युत्पन्न बनाउन थपिन्छ। यो कुल सम्पत्तिबाट कुल ऋण घटाएर गणना गर्न सकिन्छ। उच्च आम्दानीले व्यक्तिको नेट वर्थ बढाउँछ, तर त्यहाँ अन्य तरिकाहरू पनि छन्।
तपाईंको योजना सुरु गर्ने केही तरिकाहरू यहाँ छन्।
1. जीवन बीमा किन्नुहोस्
2. ट्रिम खर्च
3. म्युचुअल फन्ड र स्टक ETF मा लगानी गर्नुहोस्
4. आफ्नो ऋण तिर्न
An. आपतकालीन कोष निर्माण गर्नुहोस्
तपाईंको नेट वर्थ निर्माण गर्न, तपाईंले सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्न आवश्यक छ जुन लामो अवधिमा मूल्य प्राप्त गर्दछ। यसमा तरल सम्पत्तिहरू जस्तै बचत र सेवानिवृत्ति खाताहरू र अचल सम्पत्ति जस्ता मूर्त सम्पत्तिहरू समावेश छन्। जीवन बीमा एक सम्पत्ति हो? के यो एक सम्पत्ति हो कि तपाईं जीवित रहँदा जीवन बीमा नीतिबाट आर्थिक रूपमा लाभ उठाउँछन् कि मा निर्भर गर्दछ। त्यसकारण, टर्म लाइफ इन्स्योरेन्स स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति होइन किनभने यसले तपाईंको मृत्यु हुँदा तपाईंको आश्रितहरूलाई मात्र भुक्तानी गर्छ।
तर सम्पूर्ण जीवन बीमा जस्ता नगद मूल्य भएको जीवन बीमालाई सम्पत्ति मानिन्छ। तपाईं जीवित रहँदा आफ्नो जीवन बीमा नीतिबाट रकम लिन सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको जीवन बीमाको साथ, तपाइँको प्रिमियमको एक प्रतिशत नगद मूल्य बचत खातामा जान्छ। रकम तपाईंको नीतिमा निर्भर हुनेछ। जीवन बीमा नीतिको नगद मूल्य समयको साथ बढ्दै गएकोले, यसले जीवनभर कभरेज प्रदान गर्दछ।
तसर्थ, तपाईले यसलाई लाइफ सेटलमेन्टको रूपमा बेच्न सक्नुहुन्छ जब नीति अब आवश्यक छैन। सम्पूर्ण जीवन बीमाले निस्सन्देह उचित संरचनामा निष्क्रिय कर-मुक्त लाभांश प्रदान गर्न सक्छ। मतलब, यो जीवन बीमा नीतिले आवश्यक भएमा आयको अतिरिक्त स्रोत प्रदान गर्न सक्छ, सम्भवतः बीमा एजेन्टहरूले कति कमाउँछन्। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर, अब बीमा गर्नुहोस्।
ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईले जति कम पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईले नेट वर्थमा धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। उनले भने, बजेट समीक्षा गर्न निश्चित गर्नुहोस्। तपाइँको खर्च हेर्नुहोस् र तपाइँ कहाँ फिर्ता कटौती गर्न सक्नुहुन्छ निर्धारण गर्नुहोस्। नोट गर्नुहोस् कि यहाँ र त्यहाँ एक डलर पनि एक वर्षमा ठूलो रकम जम्मा गर्न सक्छ। त्यसोभए, तपाईले आकार घटाउन सक्ने लागतहरू विचार गर्नुहोस् र तपाईलाई आवश्यक नपर्ने लागतहरू।
म्युचुअल फण्ड र एक्सचेन्ज ट्रेडेड कोषहरू समान सम्पत्तिहरू जस्तै वस्तुहरू, बन्डहरू, र स्टकहरूको सङ्कलन हुन्छन्। स्टक ईटीएफहरू स्टक एक्सचेन्ज मार्फत बेच्न वा किन्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, म्युचुअल फन्डहरू कोष ह्यान्डल गर्ने कम्पनीबाट सीधै किन्न सकिन्छ। दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माण गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको म्युचुअल फण्ड र ETF मार्फत स्टक बजारमा आफूलाई उजागर गर्नु हो। जब तपाइँ यी सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई प्रतिबद्ध गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
बजार उतार-चढाव संग सहज हुनुहोस्। पाठ्यक्रममा रहन र तपाईंको पैसा कम्पाउन्ड गर्न आवश्यक छ। एकपटक तपाइँ तपाइँको लगानी पोर्टफोलियो संग सहज हुनुभयो, तपाइँ समय संग माथि बजार को लागी अधिक लक्षित रणनीतिहरु लिन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् कि यी लगानी विकल्पहरू सबैका लागि उपयुक्त छैनन्। उनीहरूलाई बजारमा लगानी गर्नको लागि चेला र विश्वासको स्तर चाहिन्छ।
जब तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ, आफ्नो सबै ऋण तिर्न निश्चित गर्नुहोस्। ध्यान दिनुहोस् कि तपाईले तिर्नुपर्ने पैसा तपाईको नेट वर्थ निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि, तिनीहरूबाट बच्न प्रारम्भिक भुक्तानीको लागि लागू दण्डहरू जान्नुहोस्। तपाईंको ऋण तिर्नको लागि स्नोबल विधि पछ्याउने विचार गर्नुहोस्। यस विधिमा, तपाइँ तपाइँको सबै ऋणहरूमा प्रत्येक महिना न्यूनतम भुक्तानी गर्नुहुन्छ तर सबैभन्दा कम ब्यालेन्स ऋणहरूमा थप रकमहरू राख्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईले आफ्नो ऋण तिर्न वा लगानी गर्न प्रयोग गर्न सक्ने पैसा तुरुन्तै खाली हुनेछ।
कार मर्मत वा अचानक स्वास्थ्य समस्याहरू जस्ता आपतकालीन खर्चहरू कभर गर्न केही पैसा छुट्याउनुहोस्। आकस्मिक कोष निर्माण गर्नु तपाईको नेट वर्थ बढाउन र तपाईको सम्पत्ति बढाउने एक निश्चित तरिका हो। यसले तपाईंलाई थप ऋण लिनबाट जोगिन र आर्थिक रूपमा चल्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईं सानो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र जब तपाईं अधिक बचत गर्न खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो आपतकालीन कोषको लागि थप बचत गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो वित्तीय अवस्था कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जान्नको लागि वित्तीय सल्लाहकार वा खातासँग कुरा गर्न निश्चित हुनुहोस्। उपलब्ध स्रोतहरू प्रयोग गर्न वा मद्दतको लागि सोध्न लाज नमान्नुहोस्। साथै, तपाईलाई पछ्याउनको लागि वित्तीय योजना सिर्जना गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्। जब तपाइँसँग पैसा लक्ष्यहरू छन् जुन तपाइँ प्राप्त गर्न वा पुग्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ तिनीहरूलाई कम गर्न र तिनीहरूलाई कार्यमा राख्न थप उत्प्रेरित हुनुहुनेछ। तपाइँको प्रगति निगरानी गर्नुहोस् र तपाइँ यी लक्ष्यहरूमा पुग्न सुनिश्चित गर्न के सुधार गर्न आवश्यक छ निर्धारण गर्नुहोस्।